मतदाता सोध्छन्ः बाचा कहिले पूरा होला ? « News24 : Premium News Channel
मतदाता सोध्छन्ः बाचा कहिले पूरा होला ?
पाँचथर । हरेक निर्वाचनमा आम मतदाताको अपेक्षा धेरै ठूलो हुँदैन । मात्र सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विकास होस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, हिजोआज रेल र स्मार्ट शहरको सपना देखाउने राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुबाट दिक्क देखिन्छन् आम मतदाता । निर्वाचनका बेला ठूला–ठूला सपना देखाउने दलहरु निर्वाचन पछि गाउँ फर्किन बाटै भुल्ने गरेको तितो यर्थाथ छ ।
पूर्वी नेपालको पाँचथर अहिले निर्वाचनमय देखिन्छ । नेताहरुको गाउँमा लर्को नै लाग्ने गरेको छ । त्यो पनि ठूला–ठूला सपना सहित । तर, पाँचथरबासी सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकता पुरा होस् भन्ने चाहन्छन् । मतदाताको यो चाहना आजको मात्र होइन । मुलुकमा प्रजातन्त्र उदय भएदेखिकै हो ।
विडम्वना भन्नुपर्छ ठूला–ठूला सपना देखाउने नेतृत्व संविधानतः आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समेत चासो देखाउँदैन । यतिवेला यिनै सपना बाँड्न नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको लोकतान्त्रिक गठबन्धन अनि एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन पाँचथरमा क्रियाशील छन् । आफ्नो अस्तित्व र साख जोगाउन क्रियाशील नेतृत्वसँग जनताले पुनः एकपटक हिसाव किताव खोज्दैछन् । तर, उनी पुरानै आश्वासन दोहोर्याउन छाड्दैनन् ।
निर्बाचन नजिकिदै जाँदा उमेद्वारहरु सर्बसाधारणको घरदैलोमा तछाँड मछाँडका साथ पुग्ने गरेका छन् । एक प्रतिनिधि सभा र दुइ प्रदेश सभा संख्या रहेको पाँचथरमा नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, संघीय समाजबादी लगायत ९ वटा दलले उम्मेदवारी दिएका छन् । पाँचथरमा एक लाख २५ हजार २ सय १९ मतदाताका लागि एक सय ६५ मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्ला निर्बाचन कार्यालयले जनाएको छ । पाँचथर राजनीति प्रतिको बढ्दो वितृष्णा चिर्न दलहरु अझै सक्षम देखिएका छैनन् । आफूले कबुल गरेका बाचा कहिले पूरा होला ? आम मतदाताको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।